निर्मला हत्या प्रकरण : आठै जना प्रहरीलाई सफाइ
देशभर दुई सय १० कोरोना संक्रमित थप
काठमाडौं । देशभर कोरोना भाइरसका दुई सय १० संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा दुई सय १० जना संक्रमित थपिएका जानकारी दिए ।…
सहमतिमै बनाइएको अश्लिल भिडियो बाहिरिएपछि प्रेमी पक्राउ
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरमा प्रेमिका बलात्कारको आरोपमा प्रेमी पक्राउ परेका छन् । प्रेमिकासँगको आपसी सहमतिमा कैद गरिएको अश्लिल भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रेमीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । प्रेमिकासँगको अश्लिल भिडियो सार्वजनिक भएपछि कृष्णपुर…
स्याङ्जाका थप १८ प्रहरीमा कोरोना पुष्टि
वालिङ । स्याङ्जाका १८ जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । स्याङ्जा प्रहरीका १८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले पुष्टि गरेको छ । तीन दिनको अवधिमा २१ जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना…
पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा आज सुनुवाइ
काठमाडौं । सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षण (पूर्वडिआइजी) रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावलोकनमा सुनुवाइका लागि आज (आइतबार) का लागि पेसी…
सीमामा सशस्त्र प्रहरीमाथि हसिया प्रहार, स्थिति नियन्त्रणमा लिन हवाई फायर
काठमाडौं । रौतहटको परोहामा सीमा सुरक्षार्थ खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल र भारतीय पक्षबीच झडप भएको छ । परोहा नगरपालिका–८ नरकटिया नजिकै सीमा क्षेत्रमा ड्युटीमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीहरुमाथि भारतीय पक्षले हातपात…
कोपिला चुँडिएको त्यो रात… !
काठमाडौं । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज दुई वर्ष पूरा भएको छ । तर, सरकारले अझै पनि उनका हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन । भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी…
किशोरी बलात्कार गरेर फरार भएका राजेश छोरा जन्मिएपछि पक्राउ
भक्तपुर । किशोरी बलात्कारका फरार आरोपीलाई प्रहरीले छोरा जन्मिएपछि पक्राउ गरेको छ । पत्रिकाको ग्राहक बनाइदिन्छु भनेर आफ्नै कोठामा लगेर बलात्कार गरी फरार भएका रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–९ का राजेश भन्ने सुरेश भण्डारीलाई…
निर्मला हत्याको अनुसन्धानको टुंगो लगाउन दुई डीआईजीलाई निर्देशन
काठमाडौं । कञ्‍चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको विषयमा अनुसन्धान गर्न दुई डीआईजीलाई निर्देशन दिइएको छ । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिकाको विषयमा अनुसन्धान गर्न दुई वर्षपछि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश…
प्रतिबन्धित नेकपाका सेती महाकाली इन्चार्ज पुन पक्राउ
धनगढी । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले प्रतिबन्धित नेपाल कम्यसनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य तथा सेती महाकाली व्युरो इन्चार्ज ओमप्रकाश पुन ‘निर्वाण) लाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले बुधबार बिहान नेता पुनलाई…